उपनिर्वाचन Archives – Samacharpati
पोखरामा २ बालक यस्तो अवस्थामा भेटिए, गरियो उद्धार ! चल्यो रुवाबासी ! कारण यस्तो छ
कास्की २ मा मत गणना सुरु
कास्की २ मा मत गणना सुरु भएको छ । वडा नं. ३३ बाट गणना सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बेलुका १०ः३० बजेबाट मत गन्ने बताइएपनि केहि विवाद भएका कारण १ः४० बाट मत गन्न सुरु भएको हो ।
कास्की २ मा अझै मत गणना हुन सकेन
कास्की २ मा अहिले सम्म मतगणना सुरु भएको छैन । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछी साझा र समाजवादीले त्यसको विरोध गरेका छन । उनिहरुले वडा नं ३३ को शान्ती उदय मावी केन्द्रको मतपेटिकाको सिल नं माग गर्दा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिएको आरोप लगाएका छन् ।
पोखरा, १४ मङ्सिर । कास्की क्षेत्र नं २ मा आज प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ । कास्की क्षेत्र नं २ का लागि ८२ वटा मतदानकेन्द्रमा भएको निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख महेन्द्रराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउने काम […]
१४ मंसिर, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ । विविध कारणले रिक्त रहेका तीनै तहका विभिन्न पदहरूको पूर्तिका लागि आज मतदान हुन लागेको हो । उपनिर्वाचन हुने स्थानमा अहिले बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, मतदाताले अपराह्न ५ बजेसम्म मतदानस्थल पुगेर आफ्नो मत जायर गर्न सक्नेछन् । […]
कास्की क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचनको तयारी पूरा
पोखरा, १२ मङसिर । कास्की क्षेत्र नं २ मा मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भएको छ । सो क्षेत्रका ८२ वटै मतदानकेन्द्रमा मतपेटिकालगायत निर्वाचनका सम्पूर्ण सामग्रीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटिसकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख महेन्द्रराज सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो । मतदानअधिकृतसहित खटिएको टोलीले २०७४ सालपछि थपिएका नयाँ र छुट भएका मतदाता नामावलीमा समावेश […]
पोखरा, ११ मंसिर । घरदैलो अभियानको अन्तिम दिन समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार इन्जिनियर पोखरा–२१ कृस्तिनाच्नेचौर पुगेका छन् । चुनावी प्रचार र घरदैलो सकिनै लाग्दा उम्मेदवार धर्मराजलाई कृस्तिवासीले हौसला बढाएका छन् । कृस्ति पुगेर इन्जिनियर धर्मराले छातिमा हात राखेर अहिलेसम्म जिताएर पठाएका नेताले गरेका कामलाई मूल्यांकन गरेर भोट खसाल्न आग्रह गरे । उम्मेदवार गुरुङले कसैको प्रलोभन र […]
नेकपाले सत्ता र शक्तिको आडमा बुथ कब्जा गर्दैछन्: पौडेल
कास्की, ११ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपाले सत्ता र शक्तिको आडमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दुश्प्रयास भैरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस यूनियन कास्कीले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले नेकपाले ठाउँठाउँमा बुथ कब्जा गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । चुनावको पवित्रता कायम राख्दै जस्ताको त्यस्तै जनमत ल्याउन […]
म विजयको नजिक छु : उम्मेदवार पौडेल
पोखरा, ११ मंसिर । कास्की क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार खेमराज पौडेलले आफू चनाव विजयको सन्निकट रहेको बताएका छन् । उनले जनताका आकांक्षा र मनोभावनाका साथै कांग्रेस पार्टीप्रति जनताको विश्वासका कारण आफू विजय निकट रहेको स्पष्ट पारे । नेपाली कांग्रेस, धादिङ–पोखरा सम्पर्क समितिले बुधबार आयोजना गरेको उम्मेदवारसंगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले सरकारका विभिन्न काण्डबाट जनता वाक्क […]
कास्की, ११ मङ्सिर । कास्की क्षेत्र नं २ मा आगामी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले मतदान केन्द्र तोकिएका महानगरका ११ वडाका २९ विद्यालयमा मङ्सिर १२ देखि १४ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख गङ्गाबहादुर […]
पोखरा, १० मंसिर । ‘जनता माथि गरिएको विश्वासघातको नतिजा उपनिर्वाचनले दिन्छ, अब साझा पार्टीबाहेक अरु विकल्प छैन्, तराजुले सबैको न्याय गर्छ,’ मंगलबार पोखराको सिद्धार्थ चोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै साझा पार्टीका तर्फबाट कास्की २ मा उम्मेदवार बनेकी रजनी केसीले भनिन् । उनले कास्की २ का जनताले नेतृत्वलाई कमी कमजोरी सुधार गर्ने राम्रो अवसर पाएको भन्दै […]
कम्युनिष्ट बाहेक अरुले सुकुम्वासी समस्या समाधान असंभव : करण
पोखरा, १० मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का केन्दीय सदस्य तथा कास्की जिल्ला ईन्चार्ज राजकाजि तमुले नेपालमा पहिलो पटक सुकुम्वासीहरुलाई लालपुर्जा बितरण गर्ने ब्यबस्था संबिधानमै उल्लेख गर्ने काम कम्युनिष्टहरुकै पहलमा भएको बताउनु भयो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ९ को अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ, ईकाइ समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले संबिधानमा उल्लेख भएको बिषयमा अब […]
पाेखरा, ६ मङ्सिर । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार विद्या भट्टराई (अधिकारी)ले आफूले पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास र समृद्धिको खाका तयार गरेको बताउनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको दक्षिण भेग वडा नं २१ मा आज आयोजित चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा उहाँले अबको तीन वर्षको अवधिमा बाँकी योजना सफल बनाएरै […]